Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Key West kagburu Fantasy Fest Parade nke 2021
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • culinary • omenala • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
A ka na -eme atụmatụ mbinye aka dịka Headdress Ball na Pet Masquerade, a ga -enwekwa ọtụtụ oriri masquerade na ọkacha mmasị ememme ndị ọzọ ị ga -enwe.
A kagburu ihe omume Key West a ma ama n'ihi ọrịa COVID-19.
Ọtụtụ mmemme ememme emebere ga-aga n'ihu na usoro nchekwa COVID-19.
Masquerade a ma ama dịkwa na njide ugbu a.
Ememe ngosi Fantasy Fest nke Key West na ngosi n'okporo ámá na Duval Street agaghị eme n'afọ a, ndị na-ahazi ememme nkpuchi ihu na ụbọchị iri mara ọkwa n'abalị Mọnde, iji chebe megide mgbasa nke COVID-10 na ụdị ya.
Ha kwusiri ike na ememme Ọktọba 22-31 na ọtụtụ mmemme ya ga-aga n'ihu, ebe a na-agba ndị bịaranụ ume ka ha rube isi n'iwu nchekwa COVID.
Onye isi mmemme Nadene Grossman Orr kwuru, "Fantasy Fest ga -adị iche n'afọ a, mana akagbubeghị ya." A ka na -eme atụmatụ mbinye aka dịka Headdress Ball na Pet Masquerade, a ga -enwekwa ọtụtụ nnọkọ oriri na ọ individualụ individualụ n'otu n'otu na ọkacha mmasị ememme ndị ọzọ.
Grossman Orr kwuru na Masquerade March a ma ama, nke edobere na Ọktọba 29, ka ejidere ugbu a.
Ma ngosi ngosi na ngosi ngosi n'okporo ámá na -adọta ọtụtụ iri puku mmadụ Key WestỌ bụ akụkọ ihe mere eme na ogbe ndịda.
Ndị na -ahazi Zombie Bike Ride na mkpọsa nkwado ego iji họpụta eze ememme na eze nwanyị kagburu ihe omume ha na ngwụcha izu gara aga, na -ekwu maka nchegbu COVID.
Echiche Fantasy E hiwere ya na 1979 ma nwetakwa otuto mba ofesi maka ịma mma ya, ihe ngosi mara mma na -ese n'elu mmiri na nnọkọ ejiji.
Grossman Orr kwuru na a ga -emelite usoro ihe omume na ụbọchị na -abịanụ ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha na -enyocha ya mgbe niile.
Otu mba nke mbụ, njem nlegharị anya nwere ọtụtụ ihe...
Ụlọ ọrụ ojii ga-anabata ụmụ nwanyị ike teknụzụ
Oku njem ụgbọ mmiri ọhụrụ na Falmouth Port Jamaica...
Gọọmentị German ọhụrụ ga-akwado wii wii n'ụzọ iwu kwadoro
Ahụike zuru ụwa ọnụ: ụwa ọhụrụ mgbe COVID gasịrị
Ndị uwe ojii mepere mgbọ n'oge ọgbaghara mgbochi mkpọchi na...